बुक बिल्डिङ भनेको के हो ? (शेयर शिक्षा )
मंसिर १, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा बुक बिल्डिङ प्रणाली के हो भन्ने बारेमा सर्वसाधारण अन्योलमा रहेको पाइन्छ । गत असार महीनामा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ सम्वन्धि निर्देशिकाको मस्यौदामा राय सुझाव मागेको थियो ।
योसँगै कतिपय लगानीकर्ताले अब आईपीओे रू.१०० मा नपाइने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी पनि गरेका थिए । आजको श्रृंखलामा सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा पाठकलाई बिल्डिङ प्रणाली बारेमा जानकारी दिन गत असार १३ गते आर्थिक अभियान दैनिकको वेबसाइट तथा असार १४ गते आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट शंस्करणमा प्रकाशित यो सामग्री सान्दर्भिक हुने ठानेर पुनः प्रकाशित गरेका छौं ।
सबै कम्पनीले यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन् । मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीले रू. १०० मै आईपीओ निष्कासन गर्छन् ।
केहि अंश अद्यावधिक गरि पुनःप्रकाशित गरिएको
बुक बिल्डिङ : मूल ढोका थुनेर तलामा निम्तो
धितोपत्र बोर्डले लागू गर्यो आईपीओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि